Tag: Email na-ndụmọdụ ndụmọdụ | Martech Zone
Tag: Email na-ndụmọdụ ndụmọdụ
Onye na-akwado nkwado email anyị, Delivra, wepụtara websaịtị ọhụụ mara mma, nke ezigbo ndị enyi anyị ndị ọzọ, SpinWeb mebere ma mepụtara na Accrisoft Freedom. Delivra bụ onye nkwado nke Martech Zone maka ọnwa 3, anyị hụrụ n'anya ịrụ ọrụ na ndị ahịa a raara onwe ha nye na ndị nwere ihe ọmụma sitere na Indianapolis. Usoro mgbasa ozi email nke Delivra na-enye ọtụtụ atụmatụ dabara na mkpa nke ndị na-ere ahịa, ndị isi C, na ndị mmepe, gụnyere njikwa Ndepụta, onye nchịkọta WYSIWYG, nkewa,
Whyghọta Ihe Mere na Ọkara…
Dabere na Dictionary.com: Ọkara: otu n'ime ụzọ ma ọ bụ ọwa nke nkwukọrịta izugbe, ozi, ma ọ bụ ntụrụndụ na ọha mmadụ, dịka akwụkwọ akụkọ, redio, ma ọ bụ telivishọn. Ikekwe ọrụ kachasị sie ike maka sọftụwia ọ bụla dị ka ọrụ bụ imeri usoro nke ụlọ ọrụ ị na-eje ozi. Aga m ekwu okwu kpọmkwem na ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ihe atụ a, mana ọ bụ otu ihe ahụ na ụlọ ọrụ ecommerce ọ bụla… na-aghọta ihe ndị ahịa gị na-eme online vs. na ụlọ ahịa gị, na